Uyazi ukuthi i-Alitalia izovalwa ngokusemthethweni? Futhi ukufunwa kwamalahle emhlabeni wonke kuzokhuphuka cishe ngo-2025 bese kwehla ngo-25% ngo-2050? Izindaba eziningi emhlabeni, u-Kind ubheke izindaba ze-CFM namuhla.
1. Ngo-Okthoba 12, ngokwesikhathi sendawo, iFederal Reserve Bank yaseNew York yakhipha umbiko othi ukulindelwa okuphakathi kwabathengi baseMelika ngenkomba yokwenyuka kwamandla emali ngonyaka ozayo kufinyelele ku-5.3%, kukhuphuke izinyanga eziyi-11 zilandelana futhi kwafinyelela isikhathi sonke phezulu. Yize kunjalo, uSihlalo weFederal Reserve C ...
Uyazi ukushoda kwamandla emhlabeni jikelele? Ngabe ufuna ukwazi ukunikezwa kwethusi emhlabeni? Ngabe ufuna ukwazi umthelela wokushintsha kwesimo sezulu enkingeni yamanzi yomhlaba? Bheka ngomusa okusha kweCFM ...
1. UMongameli waseRussia uVladimir Putin: I-Russia ibilokhu ingumhlinzeki othembekile wabathengi begesi yemvelo yomhlaba futhi ikulungele ukusiza ukuzinzisa imakethe yezamandla emhlabeni jikelele. Ukuthunyelwa kukaGazprom eYurophu ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zokuqala zonyaka kusondele kakhulu. Ngemuva kwezingxoxo ...
Ngabe ufuna ukwazi isikhundla sabantu abacebe kakhulu e-United States ngo-2021? Ngabe ufuna ukwazi ngokwenyuka kwamandla emali emazweni ahlukahlukene? Ngabe ufuna ukwazi izinga lokushoda kwamanzi? Uhlobo oluphansi ...
1. Ngo-2018, okungenani abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-3.6 emhlabeni jikelele babebhekene nokushoda kwamanzi okungenani inyanga eyodwa ngonyaka, kanti ngonyaka ka-2050, inani labantu abaswele amanzi kulindeleke ukuthi lenyukele kuma-5 billion. Umbiko uveza ukuthi kule minyaka engama-20 edlule, inani lamanzi agcinwe ku ...
Ngabe ufuna ukwazi izinga eliphelele lamabhizinisi? Ngabe kukhona okwaziyo ngokusweleka kwe-chip global? Ngabe ufuna ukwazi imvelo yasolwandle yamanje? Bheka ngomusa izindaba zezindaba zeCFM ...
1. NgoSepthemba 24, isikhathi sendawo, i-US-Japan-Australia-India "Quartet Security Dialogue" yabamba ingqungquthela yayo yokuqala ebhekane ubuso nobuso eWashington. Abahlaziyi bakholelwa ukuthi le ngqungquthela isinyathelo sakamuva esenziwa yi-United States namanye amazwe. "ekulweni namandla eChina" ...
Uyazi kusukela ngoSepthemba 22, imithamo yokugoma engaphezu kwezigidigidi eziyisithupha yayinikezwe umhlaba wonke. Ufuna ukwazi izindaba eziningi emhlabeni? Bheka ngomusa izindaba ze-CFM namuhla.
1. Ibhange elikhulu laseBrazil: nyusa isilinganiso sokubolekwa kwesilinganiso ngamaphoyinti ayisisekelo ayi-100 abe ngu-6.25%, ngokuhambisana nokulindelwe. Ngasikhathi sinye, ithembise ukukhuphula inzalo ngamanye amaphuzu ayi-100 ayisisekelo ngo-Okthoba. 2. I-Russian Space Agency: yakhipha imibhalo yokubhida ngephrojekthi yocwaningo kanye noma ...
Ngabe ufuna ukwazi imininingwane yakamuva ye-COVID-19 e-United States? Ngabe ufuna ukwazi ukubambisana kwakamuva phakathi kwamazwe? Ngabe ufuna ukwazi ngesivumelwano sasemanzini sakamuva phakathi ...
1. I-German Institute for Economic Research isinciphisile isibikezelo sayo sokukhula komnotho sango-2021. Sithintwe wubhubhane lwe-COVID-19, umnotho waseGerman wehla ngamaphesenti ama-4.6 ngonyaka we-2020. Ngenxa yamanani enyuka kagesi kanye nokubuyela enteleni ejwayelekile yokufaka inani, i-German Institute for Economic Research ilindele ...
Uyazi ngomonakalo wemishini yokuhlanza indle yenuzi eJapan? Ngabe uyafuna ukwazi umthelela walesi sifo emnothweni? Uyayazi imibhikisho nemibhikisho eFrance ...
1. UMnyango Wezemvelo weRussian Federation ubhale embhalweni kazwelonke osalungiswa ngokuvikelwa kwemvelo nesimo esikhona ngo-2020 ukuthi phakathi kuka-2010 no-2020, izinqolobane zikawoyela ongahluziwe zaseRussia zehle cishe ngama-33%, izinqolobane zegesi yemvelo ngama-27%, kodwa amalahle izinqolobane zinciphe kancane ....
Uyazi ukuthi umhlaba usuthole imithamo eyizigidigidi ezingama-5.5 yomuthi wokugoma i-COVID-19, ama-80% awo asemazweni anemali engenayo ephezulu nengenayo ephezulu. Izindaba eziningi zingabheka izindaba ze-CFM namuhla.
1. Umthamo wamandla we-photovoltaic nomoya we-South Korea bekungama-gigawatts ayi-17.6 (GW) ngonyaka owedlule, kanti uhulumeni uhlela ukuwenyusa abe ngu-42.7GW ngonyaka ka-2025. inqubomgomo entsha yokuluhlaza futhi ukufeza ikhabhoni ...
Ngabe ufuna ukwazi ngentuthuko entsha yalomqedazwe eSouth Korea? Ngabe ufuna ukwazi ikusasa lomkhakha wezimoto eJalimane? Uyayazi imibhikisho eFrance? Bheka ngomusa i-CFM '...
1. Us: ngo-Agasti, amaholo angakhokhelwa epulazini akhuphuke ngo-235000, okuwukhuphulela oluncane kunazo zonke kusukela ngoJanuwari 2021, okulinganiselwa ku-725000 kanye nenani langaphambilini lika-943000. izinga kusukela ngoMashi 2020. 2.Yves Institute for Econom ...
Uyazi ukuthi amaTaliban azomemezela ukusungulwa kukahulumeni omusha ngoSepthemba 3? Ufuna ukwazi izindaba eziningi emhlabeni? Bheka ngomusa izindaba ze-CFM namuhla.
1. NgoSepthemba 1, iKorea Land Research Institute yakhipha umbiko othi ukunyuka kwamanani ezindlu eGangnam eSeoul kubangelwe yimibiko yabezindaba. Lesi yisiphetho esijwayelekile sesifundo sangaphakathi “Sokushintshwa kwamanani entengo yokuthengiselana ngezindlu kusuka ku-Perspective of Behavioural Eco ...